ငွေ၏ကျေးကျွန်ဖြစ်နေသည့်မြန်မာအာဏာပိုင်များ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မောင်တော ။ ။ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂) ရက်နေ့တွင် အင်းဒင်ရွာအခြေစိုက် စရဖ အရာရှိတစ်ဦးမှ ၁၂ နှစ် အရွယ် ရိုဟင်ဂျာ ကလေးငယ် တစ်ဦးဖြစ်သူ အဗ်ဒူရာဇတ် (ဘ) ဦးလာလ် မိုဟာမတ် အား ဖမ်းဆီးပြီး ရိုက်နှက်၍ ငွေ ၁ သိန်း ၈ သောင်းရယူခဲ့သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူအား မလေးရှားနိုင်ငံသို့ လူပို့နေသည်ဟု မမှန် စွပ်စွဲ၍ သားဖြစ်သူကို ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်၍ ငွေညှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် လူကုန် ကူးမှုတွင် ပါဝင်ပတ် သက်နေသူများကို ဖမ်းဆီးခြင်း မပြုဘဲ ထိန်ချန်ထား သည်ဟု သိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ ည ၉ နာရီတွင် ငခူရကျေးရွာ အခြေစိုက် နစက နယ်မြေ (၅) မှနယ်မြေမှူး ဗိုလ်မှူးဝင်းလှိုင် ဦးဆောင်ပြီး နစကတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦးတို့သည် အောက်ပြူးမ (ဟာစာဘီလ်) ကျေးရွာရှိ ရိုဟင်ဂျာ အိမ်နှစ်အိမ်ကို ၀င်ရောက် စီးနင်းခဲ့သည်။ ဦးဇကရီယား (ဘ) ဦးနူရ်အဟမတ် (၅၂ နှစ်) နှင့် ၎င်း၏ တူတော်စပ်သူ မိုဟာမတ်အုစ်မန် (ဘ) ဦးဆယာ ဒုလ်အာမီးန် (၂၁) နှစ်တို့ကို အကြောင်းပြချက် တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဦးဇကရီယား၏သားမက်တော်စပ်သူ မိုဟာမတ်ရဖိခ် (ဘ) ဦးအဗ်ဒုလ်အား ဆက်လက် ရှာဖွေရာ၊ မတွေ့သဖြင့်နေအိမ်ရှိ ပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ နေအိမ် အနှံ့ရှာဖွေ၍ ဖမ်းဆီးနိုင်ရန်အကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာရှာဖွေ ခဲ့သည်။ ထို မှသာငွေညှစ် ရန်လွယ် ကူမည် ဖြစ်သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ရှာဖွေခဲ့သော်လည်း ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းသည့် တစ်စုံ တစ်ရာ ရှာဖွေမတွေ့ ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဖမ်းဆီးထားသူနှစ်ဦးမှ ဦးဇကီရီယားအား သား မက်ဖြစ် သူကို နေအိမ်တွင်နေ ခွင့်ပြုသည့်အတွက်ကြောင့် အကြောင်းပြ၍ ဖမ်းဆီးပြီး၊ တူတော်စပ်သူ မိုဟာမတ်အုစ်မန် ၏ အိတ်ကပ်မှနိုင်ငံခြား ဖုန်းနံပါတ်ရှာဖွေတွေ့သည့်ကို အကြောင်း ပြ၍ ဖမ်းဆီးသွား သည်။ နှစ်ဦးစလုံးကို ယခုအချိန်ထိ နစကစခန်းတွင် ချုပ်နှောင်ထားပြီး နစကတို့၏ အစဉ်အလာ အတိုင်းငွေပေး လျှင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်ဖြစ်သည် ဟုမျှော်လင့်လျက် ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
ဇန်န၀ါရီလ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ကျောက်ပန်ဒိုးကျေးရွာအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်သည့် နစကနယ်မြေ (၈) မှ ဦးကမာလ်ဟူစိန်း (ဘ) ဦးလာလ်မျာအား ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့တရားမ၀င်သွား သည်ဟုစွပ်စွဲ၍ ငွေ ကျပ် ၂ သိန်းခွဲရယူခဲ့သည်။ ထိုနေ့တွင်ပင် ဦးအဗ်ဒုလ်အာမီးန် (ဘ) ဦးနူရ်အစ္စလာမ်အား မလေးရှားသို့ လူ ကုန်ကူးနေ သည်ဟုစွပ်စွဲ၍ ငွေကျပ် ၂ သိန်းခွဲရယူခဲ့ သည်။ ထို့အတူ ဦးဟာမီဒုလ္လာ (ဘ) ဦးမိုဟာ မတ်ဆ လာမ်အား ၎င်း၏ ဦးလေးအိမ်တွင် တစ်ညအိပ်ခဲ့သည်ကို အကြောင်းပြ၍ ငွေကျပ် ၈ သောင်းနှင့် ဦးအဗ်ဒုလ် ဟာကီးမ် (ဘ) ဦးယူစွပ်ထံမှ အကြောင်းပြချက် တစ်စုံတစ်ရာ မပြဘဲ ငွေကျပ် ၁ သိန်းရ ယူခဲ့ ကြောင်း သိရပါသည်။ ထိုသို့ငွေညှစ်ခံရသူများ အားလုံးမှာ ကျောက်ပန်ဒိုး ရွာသား များဖြစ်ကြသည်။
ဘူးသီးတောင် ။ ။ ဇန်န၀ါရီလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ရွာညိုတောင် (ရိုဟင်ဂျာ တောင်) မှ ဦးဟာဘီအုလ္လာ (ဘ) ဦးဆယာဒုလ်ရာမန်အား မလေးရှားနိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးနေ သည်ဟု ဘူး သီးတောင်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှ ရဲများက မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲ၍ ငွေကျပ် ၃ သိန်းယူ သွားကြောင်းသိရသည်။
မင်းပြား ။ ။ ဇန်န၀ါရီလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် မင်းပြားမြို့နယ် လမကျေးရွာ (လိုင်ဘော်စာ)မှ ရိုဟင်ဂျာ နှစ်ဦးသည် ၎င်းတို့ရွာနှင့် ကပ်လျက်ရှိသော ရခိုင်ရွာမှ အစားအသောက်များ ၀ယ်ရန်သွားခဲ့သည်။ အကြင်နာတရားခေါင်ပါးသော ရခိုင်များမှ ၎င်းတို့အားရိုက်နှက်၍ ၀ယ်ယူလာသောအစားအသောက်များနှင့် ပါ လာသောငွေများ အားလုံးကို လုယူ လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ နောက်နေ့တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာလေးဦးမှ ရိက္ခာဝယ် ယူရန်အတွက် ထိုရခိုင်ဈေးသို့သွားရာ ထိုနည်းတူစွာ ရိုက်နှက်ခံရပြီး လုယက် ခံခဲ့ရကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
This entry was posted on February 4, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
သမိုင်းထဲက ရုပ်ရှင် (သို့မဟုတ်) ရုပ်ရှင်ထဲက တက္ကသိုလ် →